शेयर / बैङ्किङ गतिविधि | गृहपृष्ठ | Page 334
एकै दिन बीओकेका दुई शाखा
on: March 11, 2016 शेयर / बैङ्किङ गतिविधि
फागुन २७, काठमाडौं (अस) । बैङ्क अफ काठमाण्डू (बीओके)ले ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्किङ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ प्यूठानको बिजुवार र दाङको भालुबाङमा शाखा स्थापना गरेको छ । बिहीवार सञ्चालक...	बिस्तृतमा
६ महीनामा लुम्बिनीको रू. २८ करोड बीमा शुल्क आर्जन
on: March 08, 2016 शेयर / बैङ्किङ गतिविधि
फागुन २४, काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पुस मसान्तसम्म लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू. २८ करोडभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीको आइतवार सम्पन्न ११औं वार्षिक...	बिस्तृतमा
फेवा विकासले २१.९०% बोनस शेयर वितरण गर्दै
on: March 07, 2016 शेयर / बैङ्किङ गतिविधि
फागुन २३, काठमाडौं (अस) । फेवा विकास बैङ्कको सञ्चालन समितिको बैठकले गत आवको सञ्चिति मुनाफाबाट २१ दशमलव ९० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ...	बिस्तृतमा
एनएलजीको २९औं शाखा टीकापुरमा विस्तार
फागुन २३, काठमाडौं (अस) । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले टीकापुर, कैलालीमा २९औं शाखा विस्तार गरेको छ । बीमा सेवालाई देशको कुनाकाप्चामा समेत पु¥याउने उद्देश्यले कम्पनीले थप शाखा विस्तार गरे...	बिस्तृतमा
फागुन २३, काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्शियल बैङ्कले पाँचौैं वार्षिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । बैङ्कले वार्षिकोत्सवकै अवसर पारेर सर्वसुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन फ्लेक्जीलोन नामक कर्जा...	बिस्तृतमा
स्वावलम्बन बैङ्कको शाखा जुम्ला र रुकुममा
फागुन २३, काठमाडौं (अस) । स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैङ्कले जुम्लाको खलङ्गा र रुकुमको मुसीकोटमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । गरीब तथा विपन्न वर्गको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याई...	बिस्तृतमा
आईडी बैङ्कको १०% बोनस पारित
on: March 06, 2016 शेयर / बैङ्किङ गतिविधि
फागुन २२, काठमाडौं (अस) । इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट (आईडी) बैङ्कको छैटौं वार्षिक साधारणसभा बिहीवार सम्पन्न भएको छ । बैङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माधवप्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले ९ दश...	बिस्तृतमा
कैलाशमा मेट्रो र नेपाल एक्सप्रेस गाभिने प्रस्ताव पारित
फागुन २२, काठमाडौं (अस) । कैलाश विकास बैङ्कले पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मेट्रो डेभलपमेण्ट बैङ्क र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स मर्जर गर्ने भएको छ । शुक्रवार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्...	बिस्तृतमा
बिजनेश युनिभर्सलद्वारा वृद्धाश्रमलाई टीभी
फागुन २२, काठमाडौं (अस) । बिजनेश युनिभर्सल डेभलपमेण्ट बैङ्कले १२औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शुक्रवार रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । उक्त रक्तदान कार्यक्रममा १ सय १८ जनाले रक्तदान गरेका छन् ।...	बिस्तृतमा